Ndụmọdụ iji hazie Gmail ma nweta ọtụtụ n'ime ya | Akụkọ akụrụngwa
Ignacio Sala | | Kọmputa, Nkuzi
Ọrụ email nke Google, Gmail, malitere njem ya na ahịa na Eprel 1, 2004, mana ọ bụ rue July 7, 2009, mgbe ọrụ ahụ hapụrụ beta na ndị ọrụ niile chọrọ, nwere ike mepee akaụntụ email. 3 afọ mgbe e mesịrị ya unseated Microsoft (Outlook, Hotmail, Msn ...) dị ka ikpo okwu ozi eji eji eme uwa.
Onu ogugu ndi oru ugbua amaghi, ma oburu na anyi eleba anya na anyi nwere ike iji smartphone nke gam akporo, odi nkpa, ma oburu na, akaụntụ Google, anyi nwere ike ichota anu nke Gmail nwere ibu. Otu n'ime ihe ndị mere ya ji hapụ ya nọo onye-ahịa iya, anyị na-ahụ ya na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke nhazi na ọrụ ọrụ nke ọ na-enye anyị.
Ihe ọzọ kpatara ya, anyị na-ahụ ya na njikọta ya na ndị ọrụ Google ndị ọzọ dịka Google Drive, Tasks, Google Docs, Hangouts ... Agbanyeghi na ọnụọgụ nhọrọ Gmail na-enye anyị site na ngwa maka ngwaọrụ mkpanaka dị oke, ebe oburu na anyi puru inweta ihe kachasi na ya ọ dị na desktọọpụ version.
Desktopdị desktọọpụ a, nke na-arụ ọrụ nke ọma na ihe nchọgharị Google Chrome (ihe niile dị n'ụlọ), na-enye anyị ọtụtụ nhọrọ, nhọrọ adịghị na ngwa mkpanaaka, ma nke ahụ nwere ike imetụta ọrụ nke ngwa maka ngwaọrụ ndị a, dị ka izipu ozi ịntanetị, ịmepụta aha iji kee ozi ịntanetị anyị natara, na-eji isiokwu ndị ahaziri iche ...
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ihe usoro kacha mma gmail Iji nweta ọtụtụ uru na ya, a na m akpọ gị oku ka ị gụọ akwụkwọ.
1 Gbanwee onyonyo dị n’azụ
2 Ilingtọ oge nzipu ozi
3 Hazie ozi ịntanetị gị na aha mmado
4 Kagbuo izipu ozi-e
5 Kagbuo ndenye aha
6 Nzaghachi akpaaka
7 Tinye mbinye aka omenala
8 Zipu ozi ịntanetị
9 Hapụ ohere Gmail
10 Ọdịnaya njupụta
11 Igbu oge ngosi nke email
12 Gbochie onye na-ezipụ
13 Jiri Gmail anọghị n'ịntanetị
Gbanwee onyonyo dị n’azụ
Gbanwe onyonyo ndabere nke akaụntụ Gmail anyị bụ usoro dị mfe ma na-enye anyị ohere ịnye ya mmetụ dị iche na nke anyị na-ahụta. Ọbụghị naanị na anyị nwere ike iji ụfọdụ onyonyo ị nyere anyị, mana anyị nwekwara ike iji ihe onyonyo ọ bụla ọzọ anyị debere n'ime otu anyị.
Iji gbanwee onyogho nzụlite, anyị ga-pịa wiilị gia dị na elu aka nri nke Gmail wee pịa nhọrọ Gburugburu. Ọzọ, a ga-egosi ihe oyiyi niile anyị nwere ike iji na ndabere na akaụntụ anyị. N'okpuru, anyị na-ahụ nhọrọ bulite ihe oyiyi site na kọmputa anyị iji jiri ya. Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe gị, ị kwesịrị iburu n'uche na mkpebi nke foto ahụ ga-abụrịrị ihe nyocha gị anyị ga-egbochi ya ịhụ ya na pikselụ dị ka cuffs.
Ilingtọ oge nzipu ozi
Tupu njikọta nke usoro ihe omume email, anyị nwere ike ịrụ ọrụ a site na ndọtị nke na-arụ ọrụ dị ka amara. Otú ọ dị, ebe ị tinyere nhọrọ na na-enye anyị ohere ịtọọ oge izipu ozi email nwaafo wepu ihe ozo.
Ka ịtọọ oge izipu ozi email, naanị ị dee email ahụ, gbakwunye ndị nnata wee pịa ala akụ gosipụtara n'akụkụ bọtịnụ ahụ Ziga iji họrọ ụbọchị na oge anyị chọrọ ka e ziga email anyị.
Hazie ozi ịntanetị gị na aha mmado
Zinghazi aha email site na iji aha mmado bụ ihe kacha nso iji mepụta ndekọ na kọmputa iji hazie faịlụ. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ijikọ ozi ịntanetị niile kwekọrọ na otu onye n'ime folda iji chọta ha n'ụzọ dị mfe. Aha ndị a, egosiputa na aka ekpe nke ihuenyo, dị n'okpuru natara, Apụta, Egosiputala, Dị Mkpa ...
Ozugbo anyị mepụtara aha, anyị ga-emerịrị nzacha, ma ọ bụrụ na anyị achọghị iji aka gị kee ozi ịntanetị niile anyị natara. N'ihi nzacha ndị a, ozi ịntanetị niile anyị natara nke kwekọrọ na njirisi ndị anyị guzobere, ga-enweta akara ngosi anyị setịpụrụ na-akpaghị aka.
Criteriakpụrụ anyị nwere ike igosi bụ:
Nwere okwu ndị a
Ozugbo anyị guzobere nza ahụ, anyị ga-enwerịrị ihe anyị chọrọ ime na ozi ịntanetị niile gụnyere njirisi ndị ahụ. N'okwu a, anyị chọrọ itinye ihe mkpado Akụrụngwa Ngwa. Site ugbu a gaa n’ihu, ozi ịntanetị anyị natarala na ndị anyị na-enweta site ugbu a gaa n’ihu, ga-akpaghị aka tinye News Gadget tag.
Kagbuo izipu ozi-e
Ide ederede email anaghị adị mma, ma ọ dịkarịa ala ma ọ bụrụ na anyị enye ya iji zipu na sekọnd ole na ole mgbe e mesịrị, anyị ga-atụle ọzọ. Ọ dabara nke ọma, Gmail na-enye anyị ike ịkagbu izipu ozi email rue elekere iri atọ ka ezighara ya. Mgbe oge ahụ gafesịrị, Ọ dịghị ihe ọzọ anyị nwere ike ime karịa ikpe ekpere.
Iji tọọ oge kachasị elu na anyị nwere ike ịkagbu nzipu nke email, anyị ga-pịa gia dị na elu aka nri na ntọala ntọala. N'ime Izugbe taabụ, anyị na-achọ nhọrọ Kagbuo Mbupu ahụ: Oge ịkagbu Mbupu: na setịpụrụ oge sitere na 5 ruo 30 sekọnd.
Kagbuo ndenye aha
Agbanyeghị na iwu, ọ bụ iwu na ozi niile ezigara n'ọtụtụ, dị ka akwụkwọ akụkọ, gụnyere nhọrọ nke inwe ike wepu aha, ọ bụghị ha niile na-egosi nhọrọ ahụ n'ụzọ doro anya. Iji mee ka ọ dịrị ha mfe ịkwụsị ịnweta ozi-e sitere na ọrụ ndị anyị na-achọghị, Gmail na-enye anyị ohere wepu aha ozugbo na-enweghị ịrịọ ya site na usoro ndị ọzọ.
Mgbe ị na-eme atụmatụ ịga ezumike, ma ọ bụ were ụbọchị ole na ole, ọ na-atụ aro ka anyị rụọ ọrụ igwe nzaghachi nke Gmail na-enye anyị. Ọrụ a bụ ọrụ maka ịzaghachi ozi niile anyị natara na ederede nke anyị guzobere na mbụ, na-agbakwunye isiokwu na oge nke Gmail ga-ahụ maka ịza ozi ịntanetị anyị.
Anyị nwekwara ohere na a na-ezigara ozi nzaghachi akpaka na kọntaktị anyị echekwara na akaụntụ Gmail anyị, iji zere ịnye ndị mmadụ ozi anyị enweghị ịkpọtụrụ. Nhọrọ a dị site na nhọrọ nhazi Gmail na na ngalaba General.
Tinye mbinye aka omenala
Banye na ozi ịntanetị ọ bụghị nanị na anyị ga-ewebata onwe anyị ma nye ozi kọntaktị anyị, kamakwa na-enye anyị ohere ịgbakwunye njikọ kpọmkwem na ụzọ ndị ọzọ iji kpọtụrụ anyị. Gmail, na-enye anyị ohere mepụta mbinye aka dị iche iche, ntinye aka nke anyị nwere ike iji ma mgbe ị na-eke email ọhụụ ma ọ bụ mgbe ị na-aza ozi ịntanetị anyị nwetara.
Mgbe ị na -emepụta mbinye aka, anyị nwekwara ike itinye akara ngosi nke ụlọ ọrụ anyị, ma ọ bụ onyonyo ọ bụla ọzọ, dị ka nke ị nwere ike ịhụ na onyonyo dị n'elu. Ọzọkwa anyị nwere ike ịkpụzi ederede ahụ na-amasị anyị ma na font, dị ka na ya size, na ziri ezi ... Nke a na nhọrọ dị n'ime Gmail nhazi nhọrọ, n'ime General ikpehe.
Zipu ozi ịntanetị
Dị ka ọrụ ozi ọ bụla bara uru nnu ya, Gmail na-enye anyị ohere ibute ozi ịntanetị niile anyị natara na akaụntụ email ọzọ, ma ọ bụ naanị ozi ịntanetị ndị na-agbaso usoro njirisi. Iji gosipụta njirisi, n'ime nhọrọ Mbugharị, anyị ga-pịa ịmepụta nzacha ma gosipụta, dịka na aha mmado, njirisi nke ozi ịntanetị ga-ezute ka ebugharị na adreesị anyị chọrọ.
Hapụ ohere Gmail
Gmail na-enye anyị nchekwa 15 GB nke nchekwa maka ọrụ niile ọ na - enye anyị dịka Gmail, Google Drive, Google Photos ... Ọ bụrụ na anyị na - enweta ọtụtụ ozi ịntanetị na mgbakwunye, yikarịrị Gmail bụ otu n'ime ọrụ ndị na-ewere ohere kachasị. Iji tọhapụ ohere, anyị nwere ike iji iwu "nha: 10mb" (na-enweghị nkwuputa) na igbe nchọta ka e wee gosi ozi ịntanetị niile ruru 10 MB. Ọ bụrụ n ’ị dee“ nha: 20mb ”(n’enweghị akara nkọwapụta) a ga-egosipụta ozi ịntanetị nile nke ruru 20mb.
Site na ndabara, Google na-enye anyị nlele nke akaụntụ email anyị nke na-egosi ma ọ bụrụ na ozi ịntanetị gụnyere ụdị mgbakwunye na ụdị ụdị ọ bụ. Ọ bụrụ na anyị enweta ọtụtụ ozi ịntanetị n'oge nke ụbọchị ma anyị achọghị ịnweta nyocha nke ha niile, anyị nwere ike gbanwee njupụta nke ọdịnaya gosipụtara. Nhọrọ a dị n'ime cogwheel, na ngalaba Density Content.
Gmail na-enye anyị nhọrọ atọ: Ndabere, nke na-egosi anyị ozi ịntanetị na ụdị nke mgbakwunye, Ala, ebe a na-egosipụta ozi ịntanetị niile na-enweghị mgbakwunye na Kọmpat, otu imewe dị ka kọmpat anya ma ihe niile nso ọnụ, tighter.
Igbu oge ngosi nke email
N’ezie, ọ kariri otu oge, ị nwetala email nke ị ga-aza ee ma ọ bụ ee, mana ọ bụghị ngwa ngwa. N'okwu ndị a, iji zere ichefu ya, anyị nwere ike iji nhọrọ Postpone. Nhọrọ a, hichapụ ozi email site na igbe mbata anyị (ọ dị na Postponed tree) na a ga-egosi ya ọzọ n’oge na ụbọchị anyị guzobere.
Gbochie onye na-ezipụ
Gmail na-enye anyị nzacha dị ike iji zere SPAM, agbanyeghị, mgbe ụfọdụ ọ naghị enwe ike ịchọpụta ozi ịntanetị niile n'ụzọ ziri ezi. Ọ bụrụ na ike gwụrụ anyị ịnweta ozi ịntanetị nke na-esite n'otu adreesị ozi-e, Gmail na-enye anyị ohere igbochi ya ozugbo nke mere na ozi ịntanetị ha zitere anyị pụtara ozugbo na ahịhịa anyị. Iji gbochie onye ọrụ, anyị ga-emeghe email na pịa na atọ vetikal ntụpọ na njedebe nke adreesị email na họrọ ngọngọ.
Jiri Gmail anọghị n'ịntanetị
Ọ bụrụ na anyị na-ejikarị laptọọpụ arụ ọrụ, ọ ga-abụ na n'oge ụfọdụ nke ụbọchị, anyị agaghị ahụ njikọ internetntanetị. N'okwu ndị a, anyị nwere ike iji Gmail na-enweghị njikọ intaneti, ọrụ na ọ dị naanị ma ọ bụrụ na anyị ejiri Google Chrome. Nhọrọ a bụ ọrụ maka ikwe ka anyị chọgharịa ozi ịntanetị kachasị ọhụrụ ma zaa ha ozugbo site na ihe nchọgharị ahụ dị ka à ga-asị na anyị nwere njikọ ịntanetị. Ozugbo anyị jikọtara na ịntanetị, ọ ga-aga n'ihu izipu ozi ịntanetị anyị dere ma ọ bụ zaghachi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nkuzi » Aghụghọ iji hazie Gmail ma nweta ọtụtụ ihe na ya